Shiinaha Shaqo-buufin Buufin lagu Daro Shumaca Tuubbada Warshadda Culvert iyo alaab-qeybiyeyaasha. Haohang
Foomka Buufin lagu buufiyo Boobaska Tubbada Rubber ee Culvert
Foomka tuubbada 'Pneumatic Rubber Balloon Pneumatic Rubloon' waxaa laga sameeyaa caag dabiici ah iyo dhar. Guud ahaan, waxaa sameeya saddex lakab (1 + 2 = 2laab oo caag ah iyo 1 dhar lakab ah)
Buufinta Dhismaha Buufinta Dhismaha, buufinta caagga ah ee pneumatic
Foomka sambabaha sambabada waxaa laga sameeyaa caag dabiici ah iyo dhar. Guud ahaan, waxaa loo sameeyaa saddex lakab (1 + 2 = 2layer oo caag ah iyo 1 dhar lakab ah): lakabka gudaha waa xoog polymer synthetic synthetic xoog leh oo ka hortagaya xoogga ka yimaada shubka iyo cadaadiska hawada. Lakabka sare waa caag vulcanized.
Adag jilicsanaanta ayaa qiyaastii ah 65Shore A si ay u ilaaliso astaamaha u fiican, sida jilicsanaanta, adkeysiga leh, iska caabbinta.
Haddii sagxaddaada adag ay ka sii dhumuc weyn tahay, waa in lagu soo saaraa 2 lakab oo dhar ah iyo 3 lakab oo caag ah (2 + 3).
Waxaan soo saari karnaa biibiilaha qalloocan oo leh qaab kala duwan, fadlan waad u dooran kartaa shuruudahaaga mashruuc.
Ballaca: Laga soo bilaabo0.2m ilaa 3m
Wadarta Dhererka: Laga soo bilaabo 1m ilaa 28m
Faahfaahin kale ayaa sidoo kale la heli karaa marka la codsado macaamilka.
Halbeegga Qalabka Rubber
Cufnaanta dhumucdeeda, mm 3.2 ± 0.2
Adag (Xeebta A) 65 ± 5
Xiisad xabag ah oo caag ah iyo dhar, N / 25mm 8
Xoog siligga, MPa .12
Kordhinta nasashada,% 50350
300% Kala bixi fidinta dhererka, MPa 6
Kala bixi saamiga cilladaha 20% (Kahortaga dhalanrog)
Heerkulka ku habboon, ° C -10 ~ 80
Muuqaal Dildilaac la'aan, goobooyin malaha dusha sare, dhererka raadadka wasakhda kama badna 3mm, qoto dheerna kama badna 1.5mm, iyo tirada raadku kama badna hal.Qallooca kama badna 2mm
1-dhexroor laga bilaabo 0.2m ilaa 3m, (wareega)
2-wadar dherer ah 1m ilaa 28m (wareeg)
3- qeexitaano kale ayaa sidoo kale la heli karaa iyadoo loo eegayo codsiga macaamiisha.
Buugga tilmaanta hawlgalka ee buufinta caagga ah ee lagu buufin karo ARD
Isticmaalidda manbar la buufin karo:
1. Ku rid maaddada la buufin karo caaga-soo jiida murgacashada qafis xoojinta birta ah, oo kala-goysyada taagan kor uga dhig
2. Bilow buufin loogu talagalay mandrel
(1) Fur waalka iyo hawo la buufin karo si aad u dhigto saxaafadda, kadibna xir waalka
(2) Saxaafadda shaqada (Fiiri xaashida)
(1) Sababtoo ah mandrel-ka la buufin karo ayaa kor u sabayn doona marka la taaban karo ee shubka ah, markaa waa inaad hagaajisaa kor iyo hoos, oo lagu daray laaluush si looga adkaado buoyancy.
(2) Loogu talagalay φ250mm mandrel, kala dheereynta dhaqdhaqaaqa caadiga ah waa 80cm. Haddii dhexroorku korodhay, markaa kala-goysyada walaaqa waa la yarayn doonaa.
4. Shubid shub ah
(1) Nidaamka shubista shubka wuxuu kudhowaad la mid yahay qaybta adag ee la dhisay
(2) Isticmaalidda ulaha birqaya ee sarreeya ee labada dhinacba isla mar ahaantaana gariiriyeyaasha ayaa ka fogaan kara in mandrelku uu wareego
(3) Ulaha birqaya dhammaadkiisa ma la xiriiri karaan mandrel-ka, haddii ay dhacdo in waxyeello ka soo gaarto mandrel-ka iyo gaas soo daato.
5. sida adkeynta qaybta la taaban karo ka dibna gaas ka faaruqi karta godka, soo saaray kaabsoolka.
6. Maydh maydh, cadaadiska tijaabi oo kormeer. Kaydinta iyo dayactirka mandrel la buufin karo
A. Kadib markaad isticmaasho, waxaad ubaahantahay inaad sifiican ugu maydh mandrel biyo; marka aadan u baahnayn inaad isticmaasho, fadlan ku keydi mandrelka meesha hawo qaadashada iyo qalalan tahay, hana ku taaban saliidaha, asiidhyada, alkalis
T. Inta lagu guda jiro hawsha isticmaalka goobta, fadlan waa inaad ka fogaataa taabashada walxaha adag ee fiiqan.
C. Mar kasta oo ka dib markaad soo saartid mandrel la buufin karo caaryada, fadlan isticmaal burush (oo ku fiicnaa burushka nylon) iyo biyo socda si aad u dhaqdo, adoo ka saaraya shubka dusha sare si aad u ilaaliso mandrel-ka.
D. Haddii mandrel gaaska ka daato iyo filimka wax lagu xiro, waxaad isticmaali kartaa giraangirta wax lagu shiido si aad ugu gubato meesha dayactirka loogu baahan yahay ka dibna burushka caday si aad u daboosho filimka wax lagu xiro; meesha dhibta ku jirta ee faybarka, waa inaad u isticmaashaa cajalad si aad ugu daboosho dayactirka.
Codsiga biibiile caag wadata
J: Guud ahaan, waxay qaadan doontaa 10 illaa 20 maalmood kadib helitaanka lacagtaada hormariska ah. Waqtiga bixinta gaarka ah waxay kuxirantahay walxaha iyo tirada amarkaaga.
Q6. Maxaa iska lehmuunad siyaasad?
J: Waxaan bixin karnaa muunad bilaash ah hadii aan hayno qaybo diyaar ah oo keyd ah, laakiin macaamiisha waxay u baahan yihiin inay bixiyaan kharashka dirista. Aad ayaad ugu mahadsantahay fahamkaaga.
Hore: Xumbo EVA Buuxisey Difaaca Markabka
Xiga: Cadaadis sarreeya oo ah fiilooyin kaadi haysta oo buufin kara
Shiinaha Rubber Fender, Block isku dhafan, Fender Rubber, Maraakiibta Tec, Barkinta Hawada Badda, Boorsada Hawada ee Markabka,